सुनौलो अनुपात टेस्ला पिकअप को डिजाईन को लागी अगाडि दिन्छ क्रिएटिव अनलाइन
कम्तिमा धेरैको लागि न त यसले टेस्लाको पिकअप डिजाइन बचाउन सक्छ त्यो साथी र अपरिचित आश्चर्यचकित छ। तर सबै जना विचलित भएनन्, किनकि गाडी डिजाइनको परिदृश्य परिवर्तन हुन्छ र निश्चित रूपमा अर्को निर्माताले अनुसरण गर्नेछ।
विशेष गरी यदि ती २००,००० आरक्षणहरू वास्तविकतामा परिणत हुन्छन् र यसको k०० किमि भन्दा बढी यसले आफ्ना मालिकहरूलाई जहाँसुकै उनीहरू जुनसुकै स्थानमा सार्न अनुमति दिनेछ तिनीहरू जीवाश्म ईन्धन आधारित मानिसहरूसँग। र यो यो हो कि सुनौलो अनुपात टेस्ला पिकअपमा लागू गरिएको छ भनेर पुष्टि गर्न कि यो डिजाइनको सार्वभौमिक सिद्धान्तहरू पालना गर्दछ।
हामी बोल्यौ व्यापक रूपमा उनको गोल्डन अनुपात दिन मा, तर यो एक सामान्य गणित अनुपात हो कि दुई अनुपात बीच बिल्कुल सही सममित सम्बन्ध वर्णन गर्दछ। र यो जहाँ टेस्ला पिकअप जान्छ एक राहत प्राप्त गर्न अनुमोदितकम से कम कस्तूरी, इलेक्ट्रिक वाहन कम्पनीको प्रमुख।
लाइनहरु को डिजाइन र एक स्केलन त्रिकोण जुन पक्षको दृश्यबाट केन्द्र चरण लिन्छ, विश्वव्यापी धेरैले आलोचना र असहमतिको लक्ष्य रहेको छ। र सत्य यो हो कि टेस्लाको यो डिजाईनले हामीले सुरू गरिसकिएको उही चीजका बारे सबै कुरा तोड्यो र तिनीहरू सामान्य गाडीहरू जस्तै थिए जुन स्टिरियोटाइपहरू भन्दा पर गएको थिएन।
टेस्लाको पिकअप यो मोटर वाहन उद्योगको लागि पहिले र पछिको हुनेछ, र डिजाइनको लागि मात्र होईन तर यसको 800०० किमि भन्दा बढी स्वायत्ततामा पुग्नको लागि र यसले धेरैलाई अत्यधिक चाहेको वाहन बनाउँदछ। किनकि हाल सवारी सवारी 300००--400०० भन्दा बढी नहुनु उपद्रव हो। वातानुकूलन, तताउने वा ती ढलानहरू हामी यात्रामा निर्भर गर्दछ; र यदि त्यहाँ धेरै यातायात छ र हामी रोक्छौं? हामी के गर्छौ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » "गोल्डन अनुपात" वा गोल्डन अनुपात पनि टेस्ला पिकअपको डिजाईन बचत गर्न सक्षम छैन